FANAFIHANA MPIVAROTRA FIRAVAKA TETO MAHAJANGA : Teratany karana iray maty voatifitry ny jiolahy
Ny marainan’ny alarobia teo no nisy nanafika ny trano fivarotana firavaka volamena iray ‘bijouterie Krish’ ao Mahajanga be. 6 février 2019
Tamin’ny 10 ora teo araka ny nambaran’ny manodidina no nahitana ireo jiolahy miisa telo, nandeha tongotra tamin’ny lalana ampitan’ny nouvel hotel, Mahajanga be, nandalo manoloana ilay trano fivarotana volamena ary niditra tao toy ny hanontany zavatra. Tsy manao saron-tava fa manao satroka izy ireo. Mailo ny tompon-trano nahita ny fihetsik’izy ireo ka naniraka ny mpiambina haka polisy araka ny nambaran’ilay mpiambina ka izy nandeha iny no naheno poa-basy rehefa lasa lavidavitra. Araka ny nambaran’ny olona iray, teo amin’ny manodidina kosa dia niantsoantso ilay rangahy ka nanatona ny fokonolona.
Taorian’izay dia nitifitra ireo jiolahy ka nahavoa ilay raim-pianakaviana. Rehefa nivoaka avy tao amin’ity toeram-pivarotana firavaka ity izy telolahy ireo, araka ny fitantaran’ny manodidina hatrany dia namonjy moto scooters izay efa niandry azy ireo ka rifatra nandositra. Nentina teny amin’ny hopitaly kosa ilay lehilahy 61 taona antsoina hoe Kiran, izay karazana teratany karana antsoin’ny mponina eto Mahajanga hoe : “banyan” ireo. Rehefa tonga teny dia tsy tana intsony ny ainy. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava ny entana na vola lasan’ireo jiolahy.